Qalalaasaha garoommada: 4,500 duulimaad ayaa la joojiyay adduunka oo dhan hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qalalaasaha garoommada: 4,500 duulimaad ayaa la joojiyay adduunka oo dhan hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Baajiinta ugu badan ayaa ka timid shan shirkadood oo diyaaradeed, iyadoo Shiinaha Bari lagu qasbay inuu joojiyo in ka badan 1,200 oo safar ah usbuuca dhammaadka, halka Air China, United, Delta, Jet Blue, iyo Lion Air ay sidoo kale soo sheegeen tiro badan oo duulimaadyo ah.
Iyaga oo ku eedaynaya yaraanta shaqaalaha ee ay sababtay faafitaanka hillaaca cusub ee COVID-19 Omicron, shirkadaha diyaaradaha ee caalamiga ah ayaa baajiyay in ka badan 4,500 duullimaadyo gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee adduunka oo dhan inta lagu guda jiro usbuuca ugu sarreeya ee Kirismaska.
Garoomada diyaaradaha ee Maraykanku waxay ka ahaayeen in ka badan rubuc dhammaan joojinta duulimaadyada, iyadoo United Airlines iyo Delta Air Lines ay ka mid yihiin kuwa ugu daran.
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay ee caalamiga ah, 2,380 duulimaad ayaa la wacay halka 11,163 kale ay dib u dhigeen adduunka oo dhan habeenkii Kirismaska. Waxaa jiray 2,388 baajin iyo 2,579 dib u dhac ah galabtii Maalinta Kirismaska. 747 duullimaad oo kale oo loo qorsheeyay Axadda ayaa sidoo kale la baajiyay.
Baajisinta inteeda badan waxay ka timid shan shirkadood oo diyaaradeed, iyadoo Shiinaha Bari lagu qasbay inay joojiso in ka badan 1,200 oo safar ah dhammaadka usbuuca. Dhanka kale, Air China, United Airlines, Delta Air Lines, Jet Blue, iyo Lion Air ayaa sheegay in tiro badan oo duulimaadyo ah la joojiyay.
Waxaa jiray 688 duulimaad oo Mareykanka oo dhan la baajiyay Jimcihii, iyo 980 kale ayaa la baajiyay ilaa hadda safarka ugu sarreeya ee usbuuca.
Diyaaradda Jarmalka ee Lufthansa ayaa sheegtay Jimcihii inay baabi'isay 12 duullimaad oo transatlantic ah muddada fasaxa sababtuna tahay "kor u kaca weyn" ee duuliyayaasha u wacaya bukaannada, iyo in kasta oo ay u habeeyaan "daafid weyn" oo shaqaale dheeri ah muddadaas.
Qalalaasihii safarka ee daqiiqadihii ugu dambeeyay wuxuu ku sii daray niyad-jabka rakaabka raadinaya inay qoysaskooda la dabaaldegaan ciidaha ka dib taxaddarrada masiibada ah si ba'an u saameysay Kirismaska ​​​​2020.
Sida laga soo xigtay tirokoobyada ay soo saartay Ururka Baabuurta Mareykanka horaantii bishaan, shirkadaha duulimaadka ayaa la filayaa inay arkaan koror 184% ah gaadiidka inta u dhexeysa Diseembar 23 iyo Janaayo 2 laga bilaabo 2020. Maamulka Amniga Gaadiidka Mareykanka ayaa rajeynaya inuu baaro ku dhawaad ​​30 milyan oo qof inta u dhaxaysa Diseembar 20 iyo Janaayo 3.